जिज्ञासाः योनीभित्रै वीर्य झार्दा मोटाइन्छ र ? » RealPati.com
यौनसम्पर्क गर्दा श्रीमानले जब वीर्य योनीमै झार्नु हुन्छ तब लिङ्ग बाहिर निकाल्दा सबै वीर्य बाहिरै आउँछ, किन होला  ? अनि म साह्रै पातली छु । परिवार नियोजन गरेमा वा श्रीमानले योनीमा झारेको वीर्य बाहिर नआए मोटाइन्छ रे, के यो सत्य हो  ?
बैठकमा जान्न, पार्टीको कुरा सुन्दिन र प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पनि छोड्दिन भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
भारतले नक्कली अयोध्या खडा गर्‍यो : प्रधानमन्त्री